असइको श्रीमती बिना लाइसेन्स स्कुटर चलाउदै, रोकेपछि हवल्दार र असइ बीच पर्‍यो लफडा – Sandesh Press
June 6, 2021 572
काठमाडौं : प्रहरी हवल्दार राज कुमार गोले ड्युटीमा रहेको बेला एउटा महिलाले स्कुटर ल्याउँदै गरेकी हुन्छिन् र त्यही बेला हवल्दारले चेक जाँच गर्ने क्रममा उनीसँ ग लाइसेन्स नभएको पाइए पछि स्कुटर रोकेर त्यी हवल्दारले चाबी लिएर जान्छन्, त्यसपछि त्यी महिलाले चाबी दिन आग्रह गर्छिन् तर हवल्दारले चाबी दिन मान्दैनन्। लाइसेन्स नभएको कारण तत्काल लैजान नमिल्ने भन्दै जरिवाना लाग्ने बताउँछन्।
त्यसपछि युवतीलाई परिचय लिने क्रममा उनी आफू प्रहरी असइको श्रीमती भएको जानकारी दिन्छिन्।र उनीले आफ्नो हज्ब्याण्डलाई तुरुन्तै कल गरेर बोलाउँछिन्। त्यसपछि हवल्दार र असइबीच केही छिन भनाभन चल्छ। हवल्दार आफू ड्युटीमा रहेको बेला अनाव श्यक हस्तक्षेप गरि माथिल्लो दर्जाको भएर पेलेको आरोप लगाउँछन् भने असइ खण्डन गर्दै आफूले त्यसो नगरेको भन्दै क्यामेराको अगाडि प्रष्ट्याउँछन्।
त्यसपछि हवल्दार गोलेले आफ्नो परिचय दिँदै असइको नाम सोध्छन् तर असइ भने आफ्नो नाम भन्न चाहाँदैनन्। उनकि श्रीमती अगाडि बढेर चर्को स्वरमा बोल्दै हवल्दार गोलेले आफूलाई अनावश्यक दुख दिएको, आफूले लाइसेन्स को लागि फम समेत भरेको तर लाइसेन्स नखुलेको कारण आफूसँग लाइसेन्स नभएको तर्क गर्छिन्। त्यसपछि हवल्दार ले उनलाई लकडाउन अगाडि किन नबनाउनु भएको त भन्दै प्रश्न गर्छन् र जवाफमा उनी भन्छिन्, ”मैले सिकेकै थिएन त्यही भएर नबनएको।”
त्यी असइकी श्रीमती पुन ता’त्तिँदै आफू मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी नर्स भएको बताउँ छिन् र आज ड्युटी नभएको कारण कार्ड नभिरेको भन्दै तर्क गर्दछिन्। उनी निकैबेर हवल्दारलाई एकोहोरो गा’ली गरि रहन्छिन् र अर्का एकजना प्रहरी जवानले आफ्नो श्रीमान असइ भएको आडमा धेरै नबोल्न समेत आग्रह गर्दछन् । उनी क्यामेरा अगाडि निकै बेर कराइ रहन्छिन् र अन्त्यमा उनलाई उनकै श्रीमान असइले हातमा समाएर लिएर जान्छन् । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
Prevमन्त्रि भएको २४ घण्टा नपुग्दै राजेन्द्र महतोलाई बज्रपात
Nextनेपालमा फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो त डिजेल, पेट्रोलको मूल्य ?
विदेशबाट ल्याउने मोबाइल र टिभीमा छुट दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
इन्द्रेणीले गर्यो कलाकार चम्सुरीलाई उपचारको लागि यतिधेरै सहयोग (भिडियो हेर्नुस् )
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (7093)